Kabarin'i Jean Max Rakotomamonjy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Iavoloha 9 janoary 2015
Kabarin'i Jean Max Rakotomamonjy
Mipetraka ho tantara itony lahateny sy kabary ofisialy itony ka izany no izarana azy etoana.
Lahatenin’Andriamatoa RAKOTOMAMONJY Jean Max,
mandritra ny lanonana fifampiarahabana tratry ny taona 2015,
Lapam-panjakana, Iavoloha, faha 09 Janoary 2015
- Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara sy Ramatoa Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA;
- Andriamatoa isany Filohampirenena teo aloha sy Ramatoa isany andefimandrinareo;
- Andriamatoa sy Ramatoa Filohan’Andrimpanjakana eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ireo Mpikambana ao aminy ary ianareo Andefimandriny avy;
- Ramatoa sy Andriamatoa isany Mpikambana ao amin’ny Birao Maharitry ny Antenimierampirenena, ary ianareo Solombavambahoaka namana;
- Ianareo masoivohom-pirenena vahiny sy Solo-tenam-pikambanana iraisam-pirenena tonga marobe etoana;
- Ianareo olo-manan-kaja, sivily sy miaramila ary mpanao gazety;
“Ny nofy hono, tsy avy tsy matory ; ary ny tsiny, tsy avy tsy miteny”. Izaho anefa ity handahatra, hivolana sy hikabary. Ny tsiny anefa atahorako fa “tsy mitondra ny soava tsarà fa mivimbina ny atambo ary tena mahakizo fara.”
Koa amin’ny finoana ny asan’ilay Tompo mpamonjy no handroahantsika azy miaraka mba “ho eo aloha tsy ho tratra, ho ao aorian-tsy hahatratra, ho ambony tsy hanindry, ho ambany tsy hirongatra ary ho andaniny roa tsy hanery”.
Sanatria ny “hanao faniri-mananasy ka hitaingina ambonin’ny niteraka na hanao fanirian’akondro ka hisondrotra mihoatra ny zoky”.
Manao ny azafady ny tenako raha mitsangan-kivolana eto anoloanareo sangan’ny firenena, ianareo toniam-pahendrena tsy hoseranina ampitenenana.
Heveriko ary, fa afa-mandadina mora amin’izay aho, hiroso amin’ny arahaba satria Asaramanitra ny andro. Tendron’Ankaratra, hono Tsiafajavona; Tendron’Andringitra tovon-drahona fa Andriamanitra kosa no avo indrindra lolohavintsika an-tampon’ny loha. Ataontsika ahoana ny tsy hisaotra Azy nohon’ny fitahiany, ny famindrampony indrindra ny fitiavany antsika? Koa atolotsika Azy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay.
Taona maro no niainantsika tanaty krizy. Lafin-javatra maro teo amin’ny fiainam-pirenena no nahitam-pikorontanana.
Noho ny hirifiry efa mihatra amin’ny taolana mihitsy dia toa miandrandra fahagagana ny vahoaka rehefa tafapetraka araky ny tokony ho izy ny fitondrana ara-dalàna. Hetahetam-bahoaka ny hahitany fihatsaran’ny fiainany andavanandro. Faniriany ny handry fahalemana. Mahamaika azy ny hahazo antoka ny fiahiana azy amin’ny fahasalamana, fampianaran-janaka. Mahadodona azy ny hananany fahamarinan-toerana eo amin’ny asa fihariana ivelomany. Tsy anomezantsiny ny vahoaka izany satria tsy halohalika intsony ny ranombary fa efa mandifotr’olona. Miaramanaiky isika fa maika avokoa ny zavatra rehetra fa, ny omby mamaky vala, ny tanety may, ny ala forehitra, ny rano miakatra: maro ny loza aman’atambo eo anatrehana, mby amin’ny antsoin’ny Ntaolo hoe: ny antsantsa miandry seranana, ny songomby miandry vavahady, eo koa ireo fikitra mampiady angely, ny tsingala maniry ny ain’ny omby ho faty, sy ny voalavo sady mamotika ny eny an-tsaha no mandrava laka ny any an-tanàna, izay vao mainka koa manampy trotraka amin’ny fiatrehana ny fahasahiranam-bahoaka.
Miara-manaiky koa anefa isika fa “ny tany hadiana hono tsy ho mby ankarona avokoa, ny kitay nofakoina tsy ho zaka indraim-pehezana. Na te-hahavoa lanitra aza isika, tsy afa-mitoraka mihoatra ny sandry. Na maika avokoa aza ny zava-drehetra, tsy ho voaenjika i Babay sy i Lohavohitra”.
Ny zava-dehibe dia ny finiavana, ny fahatapahankevitra, ny fahasahiantsika, indrindra ny fahavononantsika rehetra ao anatin’ny fifankatiavana, ny firaisankina hiroso tanteraka amin’ny ady amin’ny fahantrana sy fampandrosoana ny firenena arak’izay takian’ny vahoaka amin’izao vanin’andro izao, mba hisian’ny fampivoarana mifandanja amin’ny isam-paritra eto amin’ny Nosy.
Fotoana fanararaotra izao, amin’ny anaran’ny vahoaka Malagasy manontolo, amin’ny maha Filohan’ny Antenimierampirenena ny tenako, izay Solombavambahoaka rahateo, ny maneho fisaorana anao amin’ny ezaka rehetra nataonao nandritra izay herintaona izay, izay efa manomboka ahitambokatsoa tato ho ato: asa maro no efa tanteraka araky ny kabary firariantsoa ho an’ny vahoaka Malagasy nataonao, tamin’ny faran’ny taona 2014 vao nivalona iny.
Ny tao amin’ny Antenimierampirenena, tsara ny ampahatsiahivana etoana mba ho fantatry ny vahoaka fa ny nifantohan’ny asa nandritra iny taona iny dia:
- ny fametrahana ny fitsipika anaty sy fananganana ny rafitra rehetra takian’ny lalàna eo amin’ny fampandehanandraharaha ao anatin’izany Andrimpanjakana izany (birao maharitra, vondrona parlemantera, vaomiera maharitra, sns…)
- ny fanaovana ho laharampahamehana sy vaindohandraharaha ny fandinihana sy fandaniana ireo volavolandalana fehizoro na tsotra, izay takian’ny vaninandro ilaina andrindrana sy anatsarana ny fiainambahoaka andavanandro. Maro tokoa izy ireny, ary noho ny adihevitra mavaivay amin’ny fandinihana sy famakafakana lalina, dia voatery, ary nilaina tokoa ny fanaovana fivoriana tsy arapotoana, mialoha, indrindra, anelanelan’ireny fivoriana arapotoana roa. Tsy hitanisa izy rehetra aho fa singaniko manokana:
- ny lalàna fehizoro momba ny Fitsinjarampahefana, izay mampiseho sy manamafy ny fahavononan’ny Fitondrampanjakana hiroso amin’ny Fitsinjarampahefana tena izy ka hitondra amin’ny fampandrosoana mirindra ny faritra tsirairay ka ho tafapaka amin’ny vahoaka.
- ny lalàna momba ny Haute Cour de Justice: fahasahiana lehibe izany ary marika maneho ny finiavantsika malagasy hiroso hatrany amin’ny fiainana ny tena demokrasia sy ny fiezahana hanao ity firenentsika ity ho tany tan-dalàna. Sambany eo amin’ny Tantaran’ny firenentsika ny hisian’izany rafi-pitsarana manokana izany, izay natao hitsara ireo mpitondra Fanjakana ambony, dia isika Filohan’Andrimpanjakana isan-tsokajiny mbamin’ny mpikambana ao amin’ny Governemanta izany.
- ireo lalàna momba ny fanitsiana ny tetibola 2014 sy ny tetibola 2015 nahafahan’ny fitondram-panjakana nanao ny asany
- fankatoavana ireo fifanarahana iraisampirenena: firenena mandala ny demokrasia sy zon’olombelona i Madagasikara ka takian’ny vaninandro ankehitriny sy ny fifandraisana iraisampirenena ny fahanterahan’izany mba isiana sy anamafisana ny fifampitokisana amin’ireo mpiara-miombon’antoka.
Marina fa mpanao lalàna ny Solombavambahoaka, kanefa koa tena manana anjara lehibe amin’ny fiaraha-mifarimbona amin’ny fampandrosoana ny firenena. Sotrobe mahita ny aty vilanin’ny valalatsimandadiharona any amin’ny faritra samihafa any izahay. Hitanay ny vay maharary ny vodiahitrarivo. Miara-mikatsaka izay hahasoa sy hahatsara ny fiainam-bahoaka araka izay manandrify antsika isika. Izay fifarimbonana izay no tena zava-dehibe ary antoky fahombiazantsika. Ny Solombavambahoaka tsy hanao vain-drahalahy tsy mba maharary. Kanefa koa olon-kandrandrana tsy azo anafenan-doha sola. Tsy hanao loa-bary mitaha vady. Ny hampandroso ny firenena no hokatsahina, ka ny lesoka tsy andrasan-kihotsaka, ny omby tondro tsy andrasan-ko omby loha. Raha vao misy ny teno-maningana, tsy hisalasala izahay hanapaka ny mitsivaka. Fa ny mandeha tokana sahalain’Andriamanitra, ny mandeha roa sahalain’olom-belona, fa tsara ny roa noho ny iray fa raha lavo misy mpanarina, raha mivaona misy mpananatra.
Ny Antenimierampirenena dia ahitana Solombavambahoaka avy amin’ny lafy valon’ny Nosy ary avy amin’ny vondrona politika samihafa. Resy lahatra ny Depiote rehetra fa ny fifahasamihafana dia fomba na fitaovana entina manatsara sy mampanankarena ny adihevitra eo amin’ny fandinihana ny volavola na tolodalàna. Resy lahatra koa ny Depiote fa ny firaisankina ihany no vahaolana mahomby iatrehana ny ady amin’ny fahantrana sy ny hirosoana amin’ny fampandrosoana. Izay no mahatonga ireo lalàna, amin’ny ankapobe, lany tsy misy mitsipaka.
Takian’ny vaninandro amin’ny firenena mivoaka avy amin’ny krizy ny fahamarinantoeran’ny fitondràna. Mikatsaka, mitandro, ary mijoro hatrany ho tompon’antoka amin’izany fahamarinantoeran’ny fitondrana (stabilité) izany Ny Antenimierampirenena.
Efa fanamby napetrakao moa io Fampihavanana io ka isaorana ianao tena niroso. Ny firaisankinantsika Malagasy rehetra no andry sy fototra tsy azo idivirana ahazoana manarina haingana ny firenentsika, mba hisian’ny fifanomezantànana amin’ny dinika sy asa rehetra atao ho an’ny Tanindrazana. Mampahery amin’ny hanohizana ny ezaka natao fa soa ho an’ny Firenena izany.
Ao anatin’izany indrindra dia heverinay fa zavadehibe ny fihaonana sy dinika ifanaovan’ireo Filohampirenena taloha sy ny amperinasa. Eo ihany koa, mba hibanjinana ny ho avy, ny firosoana avy hatrany amin’ny fitsinjarampahefana tena izy izay hitondra amin’ny fitsinjarana aradrariny ny harempirenena sy fampandrosoana mirindra ny faritra rehetra, sns…
Sahia hatrany isika handinika sy hamadibadika, hamakafaka lalina arak’izay azo atao ireo lahadinika heverina fa manahirana indrindra (sujets tabous) mba tsy hisian’ny krizy intsony, dia hiroso ampahatoniana anaty firaisankina amin’ny Fampandrosoana ny Firenena.
Manana anjara amin’izany ny Antenimierampirenena. Koa hoy izahay amintsika mpiantsehatra rehetra: “ Raha vitan-jahatra re ny mihita, aza safariana aman-tsambo; raha vitan-dinika ny hihavana, aza asarotina an-dahatra. Tsy mety ny miavon-tsahala, fandrao ho tratry ny akory izao”. Mbola be ny asa sy dingana miandry. Aleo vitaina tsara, ka tsy hanenenana rahampitso na afakampitso.
Andriamatoa Filoha, Tompokolahy sy Tompokovavy,
Migadona ity ny taona vaovao 2015. Somebiseby ny ambany lanitra, safononoka ny tontolo! Ankatso sy Ambohidempona no maraina tsy mifampiarahaba, antoandro mifandongilongy, hariva tsy mba miresaka!
Koa amin’izao Asaramanitra izao, dia fifaliana ho ahy, Atoa Filoha, ary amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy manontolo, amin’ny maha Filohan’ny Antenimierampirenena ahy, Andrimpanjakana misy ireo olona nofidin’ny vahoaka hitondra ny feony, ny miarahaba anao, raiamandreny iombonan’ny firenena, amin’izao taom-baovao izao. Tsy atao akaiky tsy tazana toy ny ravin-tsofina koa anefa Ramatoa vadinao sy ny ankohonanao ka ho diso anjara amin’ny fiarahabana izay atao. Miarahaba anareo koa izahay nahatratra izao taona vaovao izao. Tolorana ny fiarahabana an-kafaliana toy izany koa isika rehetra manatrika etoana sy ny vahoaka Malagasy any amin’ny isan-tokantrano any. Toy ny voahangy mitoho-bolamena ny arahaba sy ny firariantsoa ka raha misaraka tsy ampy ho rado. Koa tovanako amin’ny firariantsoa mahatretrika ny fiarahabana natao teo. Ny hanananao fahasalamana tomombana lavitra ny rofy, ny hanananao saina matsilo sy feno fahendrena hatrany hahaiza-mandanja ny atao sy hitsinjo ny lalan-kodiavina hahasoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy, ny hanananao mandrakariva fanahy itoeran’ny rariny sy andrian’ny hitsiny mandala ny fihavanana maha malagasy antsika, eo ambany fahasoavan’Andriamanitra : izany tanisaina izany, Atoa Filoha, no firariantsoa tonononay aminao. Maniry koa izahay, raha maniry, ho an’ny ankohonanao, fahatanjahana sy fahavitrihana hatrany amin’ny fanohanana anao amin’ny andraikitra mavesatra iantsorohanao. Ho taona zina anie ity taona vaovao ity, « ka raha hirongo dia haren-tsoa manan’amby ampy ; raha hivimbina dia fahombiazana ; raha hisakelika dia fifaliana ; raha hiloloha dia fahasalamana ». Hahita ny soa hiadanan’ny ambany lanitra.
Ary ho antsika rehetra koa, isika vory etoana sy ny ny vahoaka malagasy manerana ny Nosy sy ny any andafindriaka rehetra any, mba samy tsy ho diso anjara amin’ny fanambinana sy ny fahasoavan’Andriamanitra. Dia ho tanteraka amintsika tokoa ny tenim-pirarian-tsoa fanaon’ny Ntaolo fahiny hoe: « Sambasamba Andriamanitra, Andriananahary, ho arivo hahatratra ny taona mitsingeringerina anie isika mianakavy ! »
« Voizo ny lakana fa eny aminao ny fivoy; hadio ny tany fa maranitra ny angady . Ny rano anefa manonja ary ny tany mafy; ain’olona no mameno lakana ary kibo maro no mila ny vokatra, ka mila anao ho tody soamantsara sy ahavita ara-potoana ny asa-tany, tsy ho azon-tsapona, tsy ho voafitaky ny andro lava”.
Samia tahian’Andriamanitra isika rehetra!
Misaotra Tompokolahy, mankasitraka Tompokovavy!
COP26 : Rajoelina en quête de financements pour les œuvres de la première dame pour AI - il y a 22 jours